Ukuhambisana | Law & More | I-Eindhoven ne-Amsterdam
Emphakathini wanamuhla, ukuhambisana kokuhambisana sekubaluleke kakhulu. Ukuhambisana kuthathwe kwisenzo sesiNgisi 'ukulandela' futhi kusho 'ukuthobela noma ukuthobela'. Ngokombono ongokomthetho, ukuthobela kusho ukuhambisana nemithetho nemigomo esebenzayo. Lokhu kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani nezikhungo. Uma imithetho nemigomo esebenzayo ingalandelwa, izinyathelo zingabekwa nguhulumeni.
UFUNA UMLAYISI WOKUFUNA?
> Umthetho wobumfihlo
> Izinsiza zethu
Emphakathini wanamuhla, ukuhambisana kokuhambisana sekubaluleke kakhulu. Ukuhambisana kuthathwe kwisenzo sesiNgisi 'ukulandela' futhi kusho 'ukuthobela noma ukuthobela'. Ngokombono ongokomthetho, ukuthobela kusho ukuhambisana nemithetho nemigomo esebenzayo. Lokhu kubaluleke kakhulu kuyo yonke inkampani nezikhungo. Uma imithetho nemigomo esebenzayo ingalandelwa, izinyathelo zingabekwa nguhulumeni. Lokhu kuyehluka kusuka kwinhlawulo yokuphatha noma inkokhelo yenhlawulo yokuhoxiswa kwelayisense noma ukusungulwa kophenyo lobugebengu. Yize ukuhambisana kungahambisana nayo yonke imithetho ekhona nemigomo, eminyakeni yamuva nje ukulandela umthetho kudlale indima enkulu emthethweni wezezimali nasemthethweni wobumfihlo.
Ukuhambisana nomthetho wobumfihlo sekuye kwaba okubaluleke kakhulu eminyakeni yamuva. Lokhu kungenxa ye-General Data Protection Regulation (GDPR), eyaqala ukusebenza ngomhla zingama-25 Meyi 2018. Kusukela kulo mthetho, izikhungo kufanele zithobele imithetho eqinile futhi izakhamizi zinamalungelo amaningi mayelana nemininingwane yazo. Ngamafuphi, i-GDPR isebenza lapho idatha yomuntu siqu icubungulwa yinhlangano.
Imininingwane yomuntu siqu ibhekisa kunoma imiphi imininingwane ephathelene nomuntu wemvelo okhonjwa noma okhonjwa. Lokhu kusho ukuthi lolu lwazi luhlobene ngqo nomuntu othile noma lungalandelelwa ngqo kulowo muntu. Cishe yonke inhlangano kufanele ibhekane nokuqhutshwa kwemininingwane yomuntu uqobo. Lokhu sekuvele kunjalo, ngokwesibonelo, lapho ukuphathwa kwabasebenzi okukhokhwayo kucutshungulwa noma lapho idatha yamakhasimende igcinwa. Lokhu kungenxa yokuthi ukucubungulwa kwemininingwane yomuntu siqu kukhathaza bobabili amakhasimende nabasebenzi benkampani uqobo. Futhi, isibopho sokuhambisana ne-GDPR sisebenza ezinkampanini kanye nasezikhungweni zenhlalo ezifana namakilabhu ezemidlalo noma izisekelo.
Ububanzi be-GDPR bufinyelela kude kakhulu. Isikhungo Somuntu Sokuxhumana yinhlangano yokuqondisa maqondana nokuhambisana ne-GDPR. Uma inhlangano ingahambelani, i-Personal Data Authority ingaphoqa inhlawulo, phakathi kwezinye izinto. Lezi zinhlawulo zingangena ezinkulungwaneni zama-euro. Ukuhambisana ne-GDPR ngakho-ke kubalulekile kuyo yonke inhlangano.
Ithimba le Law & More iqinisekisa ukuthi uhambisana nayo yonke imithetho nemigomo. Ochwepheshe bethu bagxila enhlanganweni yakho, bahlole ukuthi yimiphi imithetho nemigomo esebenza enhlanganweni yakho bese beqhamuka nohlelo lokuqinisekisa ukuthi uhambisana nale mithetho kuyo yonke imigodi. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe bethu bangasebenza futhi njengabaphathi bokuhambisana nawe. Akudingeki nje kuphela ukuthi uqinisekise ukuthi uhambisana nemithetho nemigomo esebenzayo, futhi kubalulekile ukuthi uqhubeke nokulandela imithetho nemigomo eshintsha ngokushesha. Law & More ilandela eduze yonke intuthuko futhi ayiphendule ngokushesha. Ngenxa yalokhu, singakuqinisekisa ukuthi inhlangano yakho futhi izohlala ivuma ngokuzayo.